Windows 8 Activator Windows 8 Pro 64x Build 9200 အတွက်အလုပ်လုပ်သောလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကိုရှာရန်ကူညီပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် | လူတိုင်းအတွက်အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
Active ကို Windows 8 အကူအညီကို Windows 8 Pro ကို 64x 9200 Build များအတွက်အလုပ် Active ကိုရှာ။ ကြိုတင်မဲအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အနိုင်ရ 8 နှင့် 8.1 အတွက် KMS activatorspp.blogspot.jp
စည်းဝေးပွဲကိုမင်း download လုပ်ခဲ့သလား။ သူသည်အသင်းတော်တွင်ရှိကောင်းရှိနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်လည်းခံစားခဲ့ရသည်။ ဤ 100% သည်အလုပ်လုပ်လိမ့်မည်။ http://yadi.sk/d/G5-9h5YyRWku4။ ဒီဟာကိုဘယ်လိုဖတ်ရမယ်ဆိုတာသေချာအောင်လုပ်ပါ။
1) Запустить программу от имени администратора2) Внизу программы кликнуть по ярлыку Windows (справа) ,если активируете офис то Office (слева) 3) Перейти на вкладку "Activation"4) Жмем "EZ-Activator" (выделена зеленым) 5) Все! дальше все пойдет автоматом. 6) После активации нажать "Uninstall" на вкладке "Activation" под надписью "Tool — AutoKMS"Активатор в ходе своей работы создает виртуальный сетевой адаптер "TAP-Windows Adapter V9"
၎င်းသည်၎င်းကိုစစ်ဆေးပြီးအတည်ပြုသည့် virtual Internet အနေဖြင့်၎င်းကိုချိတ်ဆက်သည်
Microsoft ဆာဗာမှ activation keys
ထို့ကြောင့်၊ အကယ်၍ activation လုပ်နေစဉ်အတွင်း program သည်သင့်အားဖန်တီးရန်သို့မဟုတ် install လုပ်ရန်ခွင့်ပြုချက်တောင်းပါလိမ့်မည်
TAP-Windows Adapter V9 adapter (တောင်းဆိုမှုကိုမတူညီသောပုံစံဖြင့်ဖော်စပ်နိုင်သည် - သို့သော်အချက်သည်)
ထို့နောက်မှသာ activator အလုပ်လုပ်သည့်အခါထိုစာလုံးသည်ကွန်ပျူတာ၏ဂုဏ်သတ္တိများတွင်ပေါ်လာလိမ့်မည်
အကြောင်းပြချက်တခုခုကြောင့်သင်လိုအပ်နေရင်သင်လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ \_ t
ဒါပေမယ့် task scheduler ကသင် log in လုပ်တဲ့အခါတိုင်းထပ်ထည့်ပါလိမ့်မယ်။
ဘာကြောင့် startup မှာဘရိတ်ပိုလိုတာလဲ။
7) Для проверки срока истечения активации на этой же вкладке нажать "Check" — если кому-то очень нужно)))
တည်ဆောက်မှုမှသင်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်သည့်အခါ activation key မလိုအပ်ပါ။
Checked သည်မည်သည့်ရုံးနှင့် ၀ င်းဒိုးကိုသက်ဝင်စေသနည်း - http://pro100rabota.ru/WINDOWSactiv ကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်!
universal activator KMSAUTO -2016g ။ မိုက်ကရိုဆော့ဖ် Office အားလုံးအခမဲ့ Windows 7, 8, 8.1, 10 + အတွက်နောက်ဆုံးဗားရှင်း http://pro100rabota.ru/activWINDOWS သငျသညျကကူညီပေးခဲ့ကြသည်ဝမ်းမြောက်လိမ့်မည်တစ်ကမကထအဖြစ်သင့်ရည်မှန်းချက်ပြီးမြောက်!
Posted in, ဆော့ဖျဝဲ
65 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,205 စက္ကန့်ကျော် Generate ။